လေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားမည် ~ Myanmar Express
လေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင် သွားမည်
From : MRTV-4 ပြည်တွင်းမှ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ GUNKUL Engeineering နဲ့ အမှတ် ၂ လျှပ်စစ် စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဌာနတို့က ပူးပေါင်းပြီး လေအား လျှပ်စစ်ကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေသွားဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ လေအား လျှပ်စစ်ကို စတင် ပြုလုပ်ပေး သွားမယ့် နေရာတွေ ကတော့ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို လေအား လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးနဲ့ အခုလို မေးမြန်း ခဲ့ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။ လေအားနဲ့ လျှပ်စစ် စွမ်းအား ထုတ်လွှတ်မူဟာ လေများရင် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားရဲ့ ထွက်တဲ့နှုန်း များမှာဖြစ်ပြီး လေနည်း ရင်တော့ လျှပ်စစ်ရဲ့နှုန်း ထားရရှိမှု နည်းပါးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လေများများ တိုက်တဲ့ နေရာတွေကို ရှာဖွေကာ ဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆောင်ရွက်မှုကို နှစ်နှစ် အတွင်း ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပြီး လတ်တလော မှာတော့ ၁၀၀၀ မီဂါဝပ် စတင် ထုတ်လုပ် နိုင်အောင် လုပ်ဆောင် နေပြီး စီမံကိန်း အောင်မြင် ရင်တော့ လာမယ့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် လျာထား တယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။ Myanmar Express
မွန်ခွဲထွက် အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦး လက်နက်စွန့်
ပြင်သစ်ရှိ ဗလီကျောင်း တစ်ခုအတွင်း ဘေ့စ်ဘော ဒုတ်တြံ...
နိုင်ငံအတွင်း ဝေးလံခေါင်သီ၍ လူမှုရေး ခက်ခဲသော ဒေသမျ...
နိုင်ငံ့ဦးသျှောင် ကို စော်ကားသည့် ဝက်ဆိုက် ၅၀၀၀ က...
NLDပါတီရှေ့က ကန့်လန့်များ (သို့) ဒေါင်းယောင်ဆောင်ေ...
Blink Hacker Group အား စိန်ခေါ်ခြင်း (ပေးစာ - ၁၁၅)
ကွင်းတို ပျံသန်း ပြေး ဆွဲနိုင် ရန် မြန်မာ့ လေကြောင...
Google အနေဖြင့် မေးခွန်း များကို ဖြေ ဆိုတော့ မည်
မြန်မာပိုင် စိန့်မာတင် ကျွန်းပေါ်မှာ မဟာဗန္ဓုလ ကိုယ်...
ရွှေမြန်မာ သမီးငယ်တို့ ..စကတ်ဆို မတိုချင်စမ်းပါဘိ.....
၂ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်များ ရောင်းပြီ
မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ရှင်းပြတဲ့ ရေပိုင်နက် ပြဿန...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အများစုအနိုင်ရမည်ဟု ပြည်ခိုင်...
အမေရိကန်၏ ရေနံ တင်သွင်းမှု ကျဆင်း
၂၀၁၄ တွင် အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး ဝန်ကြီးများအဆင်...
လေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပ...
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အထေ...
ဓမ္မကထိကများ နယ်လှည့်တရားဟောရာတွင် လိုက်နာရန် စည်းက...
ရေပိုင်နက်ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD သို့ အိပ်ဖွင့်...
အမှိုက်စို များမှ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ် သွားရန်...
စင်္ကာပူကုမ္ပဏီတခုက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးဆယ်ယူ ရန်က...
လက်တွန်း အမှိုက်လှည်း များနှင့် အမှိုက်သိမ်း ကားများ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာ ရေပိုက်နက် အငြင်းပွားမှု မြန်...
အာဖဂန် အရပ်သားများကို ပစ်ခတ်သူမှာ ဦးနှောက် ထိခိုက...
Yahoo မှ Facebook ကို တရားစွဲ
ဘက်လိုက်မှုကြောင့် Al-Jazeera သတင်းမှ အလုပ်သမားများ...
သတင်းလိမ်မှုကြောင့် The Voice ဂျာနယ် အရေးယူခံရ
စိန်အမြောက်အများထွက်ရှိမည့် စိန်တွင်း မြန်မာနိုင်င...
ရွေးကောက်ပွဲမျှတမူ ရှိမရှိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစေ...
ကေအိုင်အို၊ ကေအိုင်အေ တို့နှင့် သုံးရက်ကြာ ရွှေလီတွ...
အမေရိကန်အမျိုးသမီး စစ်မှုထမ်း ၈ ဦး စစ်တပ်ကို တရားစ...
တောတွင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ...
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြ...
ဝိဇ္ဇာနှင့် သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်များ၌ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘာသ...
ကျွန်မျိုးဟေ့..ဒို့မြန်မာ..ကြည့်ကြပါဗျာ (ပေးစာ-၁...
လိုင်းကားများပေါ်တွင် ယာဉ်စီးခကို ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြင့်...
ဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီငယ်များ အကျပ်အတည်း တွေ့နေကြ...
(၆၇) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ဂုဏ်ပြုဇတ်လမ်း
မန်းလွှတ်တော် တတိယ ပုံမှန် အစည်းအဝေးတွင် မေးခွန်း ၁...
စင်ကာပူ အိုင်တီကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက မြန်မာပြည်ဈေးကွက်...
ဒီမိုတွေ ရဲ. အဆဲမခံချင်ရင်တော့ ဒီဂါထာလေးရွတ်ကြ
မြန်မာ့အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပြပွဲ Myanmar Job F...
ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာ စီးတီးမှ ကျောင်းသားများ တောင်ကိုရီ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်ပြ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန...
၈၈ မျိုးဆက် ဌေးကြွယ်နဲ. NLD အမတ်လောင်း စန္ဒာမင်းတု....
အတိုက်အခံတွေက ထိတော့လည်း နာတတ်ကြတယ်
သူခိုးဓါးရိုးကမ်၊ အဆိပ်ပင်ရေလောင်း၊ကိုယ့်လည်ပင်းလှီးမဲ့ ဓါးကို သွေးပေးနေသူများ
သီရိလင်္ကာကတော့ မူဆလင်ပိုင် NOLIMIT ကုန်တိုက်မှာ ဈေးဝယ်တဲ့ လင်္ကာသားတွေကို
သူခိုးဓါးရိုးကမ်၊ အဆိပ်ပင်ရေလောင်း၊ကိုယ့်လည်ပင်းလှီးမဲ့ ဓါးကို သွေးပေးနေသူများအဖြစ်...
သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကို ပင်တဂွန်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်သင့်ကြောင်း ဝါရှင်တန်အခြေစိုက် CSIS အဖွဲ့က တိုက်တွန်း
From : ..hmuu zaw
လာမယ့်သီတင်းပါတ်အတွင်းမှာ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဝါရှင်တန်လာရောက်ချိန်မှာ သမ္မတ အိုဘားမားအနေနဲ့ ပင်တဂွန်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွ...
နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (သန်လျင်)မှ မေဂျာပေါင်းစုံ အမျိုးသားဘောလုံး အားကစား ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
[image: နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (သန်လျင်)မှ မေဂျာပေါင်းစုံ အမျိုးသားဘောလုံး အားကစား ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ]
ရန်ကုန် မေ ၁၇ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး သန်လျင...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ အား အိမ်ဖြူတော်၌ ကြိုဆိုလက်ခံမည်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်မည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အတွင်းရေးမှူးရုံးက မေ ၁၅ ရက...
တရားမဝင်နယ်စပ် ဖြတ်ကျော်သူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ဦး ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ကျခံရဖွယ်ရှိ
တရားမဝင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခိုးဝင်လာသူ အမျိုးသမီး ၂ ဦးအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သား ၂၀ ဦး အား မ ဏိ ရပြည် နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေ ချိုးဖောက်သည့်...